Kuyoyithinta kanjani izwe art, uma hhayi amafilosofi esidlule ehola ongqondongqondo, zamanje nezesikhathi esizayo? Ngokwezazi ezithile azibhala, ukwazi inquma nenhlalakahle , futhi lokhu liyisici esibalulekile kakhulu iqiniso. Worldview amafomu womuntu wonke ozungezayo kuye, oqala ekuseni inkomishi yekhofi ziphethe obukhulu kuzo ukupenda, umculo kanye izakhiwo.
Ubukhulu zezakhiwo baraque, amasonto ongaqondakali Gothic, okukhulu futhi njalo yobuciko zakudala bokwakha emhlabeni - konke lokhu kungenziwa ngokuthi ifa amafilosofi nokubukwa kwezwe elisizungezile ahlukahlukene. Iyathinteka futhi deconstruction bokwakha. Abantu abangahlakaniphile neze art umlando, akunakwenzeka ukuba bakwazi ngokuqiniseka ukuchaza lesi simo, noma kunjalo, angakwazi intuitively lokucabanga izici zayo eziyinhloko, kanye nakakhulu ukwaba isakhiwo elakhiwa ngo namasiko alo engcono.
Lapho "ukhule imilenze"
Njengoba kushiwo ngaphambili, deconstruction bokwakha has kwaqala nefilosofi, okungukuthi izimfundiso Jacques Derrida - wayecabangisisa abavelele French Lokudabuka Algeria. Yaba iziphakamiso zakhe eziyinhloko ukusiza ukunquma izici zalesi isitayela lihlukile lutho ezazakhiwe ngaphambili.
I imisebenzi athandwa kakhulu Jacques Derrida esetshenziswa e-United States, okuyinto ebangela yokuthi kwaba abakhi American benza ngesikhathi sakhe, isinyathelo sokuqala maqondana into entsha bokwakha emhlabeni. Naphezu kweqiniso lokuthi sefilosofi French azi- umlandeli Freud sasho futhi Martin Heidegger, umbono wayo emhlabeni ngokwezinga elikhulu ezahlukene kusukela iphuzu Ngenxa "othisha" Derrida.
Zonke sazi izwe kubhekwa njengento umbhalo, akadingi ukuhleleka kuka, futhi deconstruction - engahlangani, yokufuna engeli abukhali nemininingwane oluvelele. Umqondo oyinhloko yakhe ngaphambi kwemisebenzi yamandulo kungahlali kahle futhi zigcinwe umbono ka postmodernism, abusa ngaleso sikhathi emhlabeni. Kungokwemvelo ukuthi lolu hlobo ukubukwa, defies zonke evamile futhi zemvelo, basabela ngokushesha abaculi eziholayo.
Hhayi ngaphandle Rossi
Okudidayo ukuthi, kwaphakama deconstruction kubangelwe izici e izakhiwo izakhiwo, ezokwakha phezu endaweni ye-USSR ku 20s. wesimethri Ingabe Ohulumeni Banalo Lonke, ukuvumelana kanye lula - lokhu yilokho zenani bokwakha yasekhaya. Ezifanayo ukwakhiwa yabo yendlu wakhula imizi ngemizi, like amakhowe emva imvula enhle.
Njengoba wazi, phakathi eU.SSR ne-United States baye nokuphikiswa njalo: ngendiza yokuqala emkhathini kanye kokwehla on enyangeni, umbuso wezempi, izincwadi, izindawo ezazilawulwa - konke lokhu kuye kwavusa ukuphishekela ubuhle, okungase ngokuthi omunye yelikhono best of intuthuko. Kungokwemvelo ukuthi monotony of izakhiwo Soviet wathola impendulo efanele e-United States, lapho kuye kwavula ngesikhathi deconstruction isikhathi bokwakha.
Uhlaka iBhayibheli ngohlelo lokulandelana kwezenzakalo
Yiqiniso, indlela abantu abasabela ngayo izintandokazi Soviet bokwakha kwakungelona ngokuphazima kweso. Ukuze wakhe owakho Ukugeleza okusha edingekayo isikhathi sokufundisa kuphela kodwa futhi push okuhambisanayo ngu ifilosofi, elaba umqondo ka Jacques Derrida. Isitayela deconstruction bokwakha wazalwa 80s kwekhulu lamashumi amabili. kwezifiso Umhlaba futhi ekuphishekeleni Ingabe Ohulumeni Banalo Lonke ngemibuzo, indawo ukuthambekela maqondana ekusithekeni, iphutha, futhi ifilosofi "ukuphelela baphazamiseke."
Izinyathelo zokuqala ekufezeni engaziwa
Amaphayona izishayamthetho we isitayela baraque ubhekwa uPetru Eisenman noDaniyeli Libeskind - abaklami American owayesebenza 80s sekwephuzile. Ikakhulukazi, ingqopha-mlando emlandweni wokukhulekela ukuthuthukiswa kanye ukusungulwa lo mbono ukwakhiwa ubhekwa amaphrojekthi Yokuwina Eisenman kanti uBernard Schumi Umncintiswano Parc de la Villette.
Ngemva kwalokho deconstruction e sesakhiwo ekhulwini lama-20 kubonakala ezincwadini Dutch umhlaziyi REMA Kolhasa. Kwaba kukhona ukuthi ibonisa imibono eziyisisekelo, izakhiwo nokuthambekela lokhu isitayela iminyaka eminingi ezayo.
Ayikho ezingabalulekile kangako umcimbi Abasekeli nokungezwani kwaba embukisweni Museum of Modern Art, waqhutshelwa eNew York ngo-1988. Kwaba kukhona ukuthi banikezwe imisebenzi emikhulu okuqondene lesi sitayela. Njengoba abagqugquzeli balo mcimbi babe Mark Vigli futhi Filip Dzhonson.
Khona-ke, ngo-1989, izimpawu deconstruction bokwakha kwavele cwaningo nokucabangela olunemininingwane ethe xaxa ngesikhathi kuvulwa Veksnerovskogo Arts Centre, yakhelwe ngu-Peter Eisenman.
Esinye sezenzakalo ukhiye maqondana kumiswa isitayela esisha kwaba embukisweni ezenzeka e-New York ngokushesha ngemva kwalokho. Phakathi nohlaka yayo, thina banikezwe imisebenzi best of abaklami ezifana Kupa naseHadidi, Bernard Schumi, Frenk Buyela Umva, iNsalela Koolhaas nabanye. Kuyaphawuleka ukuthi ngemva kwaleso senzakalo, abaklami abaningi ehamba phambili ukuziqhelelanisa umbono ka deconstruction, zingazikhetheli ngezinye izindlela emisebenzini.
Nokho, ukuthandwa lokhu isitayela yezakhiwo , lo mcimbi akagcini - izakhiwo kuze kube manje emhlabeni wonke abakhuthalele lakhiwa ukuthi ukuyichaza izakhi ejwayelekile disharmonic futhi kwendle.
Naphezu igama kancane ongaqondakali futhi kunalokho nzima, izimfanelo deconstructivism isitayela bokwakha and design ingaphakathi, ungakwazi kalula ukubona ngisho ngaphandle kokuba i Umhlaziyi wobuciko.
Ngokwesibonelo, omunye izimpawu ezicacile kakhulu futhi ongasoze kungenziwa ngokuthi ukukhangwa ekhethekile affectation, ukuma quin, kungakhathaliseki isihloko, kungaba into ebaziwe, ibhilidi noma nje esihlalweni abavamile. emakhoneni Cijela futhi, esonta ezibonakala okungalungile, ematfuba kanye izakhi enqwabelanisa kwakwakhiwa - konke lokhu angabizwa ngokuthi quintessence ka deconstruction. Kuba njalo kuyinselele eyenzekayo ajwayelekile, ukuvusela abanye imizwa yothando ne ukwazi esikhundleni salokho okufanele likubone.
engeli Crooked, ezitshekile izindonga ukukhahlela wadela ophahleni ziyamukeleka impela nesimo sesakhiwo esikhulu lesi sitayela. Ngaphezu kwalokho - bobunjwa fancy, ikhwalithi ngaphezulu, esinembile kuyoba iphrojekthi njengabangaqondakali kungase kuzwakale.
Izinhloso Ezinhle futhi manifestos
Ukuvunywa kwanoma yiliphi isu lobuciko kudinga ukumelwa Ngaphandle kwezinto zalo ezibonakalayo. Iyathinteka futhi deconstruction bokwakha. Photo Dancing House, etholakala e Prague, noma-Massachusetts Institute of Technology namuhla ajwayelekile, mhlawumbe, njalo connoisseur yobuciko angajwayelekile. Isibonelo esingokoqobo lesi sitayela kungenziwa ngokuthi kanye Guggenheim Museum, elise ensimini ka-Bilbao.
kusuka ngaphandle ngaphakathi
Uma ukwakhiwa kudinga ukutshalwa ngemali okukhulu, umklamo ingaphakathi ezindlini kanye namahhovisi kungenziwa ngokuthi ethengekayo. Deconstruction emaqaqasini amabhange yesimanje, nengcebo kanye imodeli amakhaya - lo mkhuba ngempela ejwayelekile namuhla. Kuleli zwe lanamuhla omunye okhiye main empumelelweni kungenziwa ngokuthi ikhono hit nge kunokulahlekelwa sibhekane ifenisha kanye izesekeli zenziwa nge ukunambitheka ekhethekile.
The elingaphakathi e isitayela deconstruction kusho ifenisha fancy, izindonga esobala noma phansi convex, ngokuphelele amafomu zicatshangwe ka izibani ezilengayo amathebula noma, isibonelo, uhlanganyela phezu kwekhanda lakhe niches okukhulu kakhulu.
Amakamelo, efana labyrinths iningi real futhi uma ezincwadi ngobugebengu - konke lena deconstruction ezimaphakathi nezwe, okuyinto namuhla ijabulela ithandwa enkulu. Isifiso okuphakade okwakhe kanye wokumelana umhlaba wonke - ukuthi indlela ungakwazi ukuchaza lesi sitayela. Mhlawumbe, ngokuhamba kwesikhathi abantu experiment ukungicika imibala, bobunjwa ukwakheka, kodwa uyinike i Izinhlobonhlobo eziningi zamakhekheba ongakhetha phakathi kwawo kukhona i-kwakwakhiwa kakhulu ngisho zicatshangwe.
Abstract - Iyini? Abstract Umdwebo: abameleli nemisebenzi
Indlela ukukhetha ibhantshi
Ukuze ngaphandle inkinobho amandla ukuqala ikhompyutha uma it aphula?
Smolensk, Assumption Cathedral: incazelo, ikheli
Kungani "BK"? Imigomo "VKontakte" akusebenzi: yini okufanele uyenze?